4 ịmata ihe banyere okpomoku uwa | Netwọk Mgbasa Ozi
El okpomoku zuru uwa ugbu a ọ bụ otu n'ime egwu kachasị egwu ụmụ mmadụ chere ihu kemgbe ọtụtụ puku afọ. Ọ bụ nsogbu, nke na-emegiderịta onwe ya, anyị emela kawanye njọ ma anyị na - eme onwe anyị ka anyị dịkwuo njọ kwa ụbọchị, ma ọ bụ iji ụgbọ ala, igbukpọ osisi ma ọ bụ mmetọ.
Ọzọ m ga-agwa gị 4 ịmata ihe banyere okpomoku uwa nke mere na ị ga-aghọtakwu otú ọnọdụ ahụ dịruru njọ.
2 Iju mmiri
3 Mbibi nke ọdọ mmiri
4 Mmiri aja aja
Thawing bụ otu ihe dị egwu nke okpomoku zuru ụwa ọnụ, ọ bụghị naanị n'ihi na mmiri niile gbazee na-abanye n'oké osimiri, na-eme ka ọkwa ya rịa, kamakwa na-eme ka ndụ sie ezigbo ike maka anụmanụ ndị bi na usoro ihe ndị a, dika pola bea.
Ma dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, mgbe ice gbazere ahụ na - adịghị ndụ na - ekpughere, nke, Ọrịa Na-efe Ọgwụ Echere na Ọ Ga-apụ apụ.
Iri na atọ n'ime obodo iri na ise kachasị mkpa n'ụwa niile dị mita ole na ole (ọbụnakwa centimeters) site na oke osimiri. Alexandria, California, New York, n'etiti ndị ọzọ, nwere nnukwu nsogbu nke ide mmiri, nke nwere ike ịbụ ihe ruru mita abụọ dịka NOAA si kwuo.
Mbibi nke ọdọ mmiri
Ruo ugbu a, Lagbọ mmiri Arctic 125 apụwo n'anya dị ka mmetụta nke okpomoku zuru ụwa ọnụ. Ma ọ bụ na permafrost dị n'okpuru ha na-agbaze, nke ejiri ya mee ka ọdọ mmiri ndị ahụ banye n'ala. Mụ anụmanụ ndị bi na mmiri a nọ n’ihe ize ndụ nke ịla n’iyi.
Mmiri aja aja
Ka ụwa pụtara ụwa dum na-abawanye, ọdọ mmiri ga-amalite inwe ihe ndị ọzọ dị ndụ, dị ka algae. N'ihi ya, osisi ndị dị n'ime omimi ga-amalite ịla n'iyi n'ihi enweghị ìhè anyanwụ. N'ime ime nke a, ụmụ anụmanụ ndị na-eri ha ga-emegharị ahụ ma mee ka ha rie ihe ndị ọzọ ma ha chọọ ịdị ndụ.
Okpomoku nke uwa bu nsogbu diri anyi niile. Ọ bụrụ na anyị lekọta mbara ala anyị anya, ọ nwere ike ọ gaghị oke oke nsogbu na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » 4 ịmata ihe banyere okpomoku uwa
Onye dere ihe a? Ọ bụghị ọkà mmụta ihu igwe, ka ọ bụ? Ọ bụghị ọkà mmụta sayensị, nri? Ọ gaghị amụ akwụkwọ physics na ndụ ya ma ọ bụ ọ gafere ngalaba ọ bụla gbasara sayensị gburugburu ebe obibi. Ọ naghị eju m anya na onye ọ bụla na-amaghị ihe ọ bụla banyere nke a nwere echiche na ọ na-eme. Ndị na-eme nchọpụta ga-agwarịrị eziokwu dị ka ọ dị, na-ejighi ihe eji achọ mma chọọ ya mma, ma, n'echiche m, enweghị ike igosipụta ma ọlị. Ọtụtụ na-akọ akụkọ ụjọ, nke na-akwado mmasị ma si otú a chebe onyinye ha, dị ka ọtụtụ NGO, nke were 150 nde afọ gara aga maka ọmụmụ ihe na-enweghị isi. Ma na Meteorologiaenlared? Ha ekwesịghị ịga ebe ha na-amaghị, ma ọ bụ opekata mpe kwuo ndị bịanyere aka na ya, ihe sitere na ha ma ọ bụ chọpụta na ọ bụ echiche onwe onye, ​​yabụ anyị nwere ike ihichapụ ya na ndị ọkacha mmasị anyị.
Zaghachi Juanjo Castro Ríos
I kwuru eziokwu: isi mmalite ha na-efu efu. Ana m etinye ha.
Ọ dị m nwute na ọ gbasara gị.